Ny Randrana - Instant Malagasy
Par Parfait Partout dans Isika Malagasy le 4 Janvier 2013 à 14:24
Misy ny milaza fa ny volo mirandrana dia mirakitra fihavanana ary azo itarafana ny tsy misara-mianakavy sy ny maha-iray. Ny volo no ambony indrindra eo amin’ny tenan’olombelona, ary maneho ny toerana misy ny vehivavy iray.
Ho an’ny zaza madinika dia ny randrana antsoina « lambomiditra » na randra-madinika. Manomboka eo amin’ny tovovavy, dia ny « tanana ivoho » no iraisana. Raha vehivavy maty vady kosa, dia « bango tokana », randrana iray ao an-katoka no entiny.
Raha misy zaza foraina ao amin’ny fianakaviana, dia mirandrana avokoa ny vehivavy ao an-trano : « difisesy » (misesy midina) na « randra-madinika ». Mizara tsy ankasa kosa ny fitondrana azy.
Ny randraketsa (miendrika ketsa) dia samy manana ny filazany azy isam-paritra : randrankodidina, randramandry, randrambavy, randrambalaika, randramandady, randramiakatra, randranampanga, randrankirondro.
Maro ireo karazan-drandrana sy taovolo fahiny izay efa zary adino avokoa ankehitriny. Ohatra fotsiny ireto.
Antaimoro : lafitriakondro, ny telo an-kila, tsitombotomboka, vakimanasa
Betsileo : bango, bango anakova (randram-bolon’ny zanak’andriana), bango tsotra, kiary (mihodidina), kifetriposa (miendrika tongotra), kifehaka, kihohoka (mivadika), kilafitsotsy, kilafahonofotsy, kilavoahibary, kipetaka, kirazorazo, kisabokisiny (misy fato-bolo bor), kisahondra (mikiramborambo), kitelo, kidimy, kifito, kifolo an’ila (mikiramborambo), kitokandalana (misoritra tokana), kivona, randrana tsotra, rasaraka, tadimpintana, tototsongo, valalamihoatra, vombory, tsaramaha, vonkavia, volo misaona
« Mita adidyAntso Fanahi-ana »
Finaritra indrindra e, raha ny hevitro amin'ireo ohabolana ireo dia izao. Ilay hoe 'Adala ny manina ka ny tompom-bady no hafarana" dia midika ara-bakiteny hoe tsy mahalala ny olona hafarana izy fa may ny te hahita ilay olon-tiany fotsiny ka na dia ny vadin'ilay olon-tiany aza no mihaona aminy dia hafarany. Ny hoe "sola mindran-kety ka mahabe eritreritra" moa dia ilazana ireo olona manao fitondran-tena hafahafa mety tsy hifanaraka amin'izay zavatra tokony hataony ka mahalasa fisainana ny manodidina azy. Mirary soa e!!
Miarahaba tompoko o!! mba mangataka fanampiana azafady amin'ny dikan'ity ohabolana manaraka ity sy ny tiany ahatongavana. "Adala ny manina ka ny tompo-bady no hafarana."
"Sola mindran-kety ka mahabe eritreritra"
Instant Malagasy - Comment faire un blog gratuit - Eklablog - CGU - Signaler un abus -